सिक्किम सरकारबाट जनतालाई दुईवटा उपहार - The Sikkim Chronicle
Jun 16, 2020 - 15:58
सिक्किम सरकारको तर्फबाट दुईवटा ऐतिहासिक निर्णयको घोषणा भएको छ। भारत सरकारको केन्द्रीय आरक्षित सूचीमा अनुसुचित जाति, जनजाति अनि अन्य पछौटे वर्गमा सामेल नभएका आर्थिक रुपले पछौटे वर्गका नागरिकहरु अब १०% केन्द्रीय आरक्षणको हकदार हुनेछन्। यो निर्णय भारत सरकारद्वारा अगावै यसबारे लिइएको निर्णयलाई कार्यान्वित गर्नको निम्ति लिइएको हो।
16 जूनमा भएको सिक्किम सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकमा सो निर्णय लिइएको जानकारी मुख्य मन्त्रीका सचिव एस.डी. ढकालले आज टासीलिङ्ग सचिवालयमा डाकिएको पत्रकार सम्मेलनमा दिएका हुन्। यसबारे बोल्दै तिनले भने, लोक सेवा लगायत राज्य बाहिर केन्द्र सरकारका अन्य नोकरीहरुमा काम गर्न चाहनेहरुले लामो समयदेखि यसको आकांक्षा राखेका थिए।
यसलाई ऐतिहासिक विकासको रूपमा घोषणा गर्दै सचिवले यो विषयलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। यसलाई बड़ो जोरदार ढंगमा परिषदको बैठकमा राखेर विस्तृत छलफल पछि पारित गरिएको तिनले उल्लेख गरे। यस आरक्षण सम्बन्धी अधिसूचना एक साताभित्र जारी गरिने तिनले थप जानकारी गराए।
आरक्षणको हकको बारेमा बोल्दै सचिवले भने कि निर्धारित वर्गका ‘आर्थिक रुपले पछौटे वर्ग’ भित्र पर्ने व्यक्तिहरुमात्र यस आरक्षणबाट लाभान्वित हुनेछन्। यस आरक्षणमा ती नागरिकहरु समावेश छन् जसको पारिवारिक वार्षिक आम्दानी रु 8 लाखभन्दा कम छ, वा जससँग5ऐकरभन्दा कम जमीन छ, वा कुनै नगरपालिका क्षेत्रमा १००० वर्गफुट भन्दा बढ़ीको आवासीय फ्ल्याट छैन, वा नगरपालिका क्षेत्रमा १०० वर्ग यार्ड (900 वर्ग फीट) भन्दा कम आवासीय जग्गा छ, अथवा नगरपालिका क्षेत्र भन्दा बाहिर आवासीय जग्गा २०० वर्ग यार्ड भन्दा कम छ। यी मानदण्ड पूरा गर्ने नागरिकहरूलाई महकुमा अधिकारी वा अतिरिक्त जिल्लाधीश वा जिल्लाधीशद्वारा आर्थिक रूपले पछौटे वर्ग भनी प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ। सो आरक्षण प्राविधिक र वैज्ञानिक पद र त्यस्ता अन्य पदहरुमा लागू हुने छैन जो केन्द्रिय सेवा अन्तर्गत छैन ।
सचिव एस.डी. ढकालले मन्त्रीपरिषदको बैठकमा लिइएको अर्को ऐतिहासिक निर्णयको बारेमा मिडियालाई जानकारी गराए। राज्य सरकारको सी र डी वर्गका सबै पदहरूको लागि मौखिक परिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रणाली अब उसो हटाइने छ। उनले यसको अधिसूचना जारी भए पछि तुरन्त प्रभावका साथ सरकारी पदहरुका निम्ति कुनै किसिमको मौखिक परिक्षा लिइनेछैन।
Bimal Thapa Jul 13, 20200585
admin Jul 14, 20200361
Bimal Thapa Jun 14, 20200505
Bimal Thapa Sep 30, 20200990
admin Jul 17, 20200314
Shradha R. Chhetri Sep 29, 20200286
Diki Choden Bhutia Aug 17, 20200650
admin Sep 27, 20200456
SC Desk Jan 31, 20200475
SC Desk Sep 19, 202001507
admin Sep 1, 202002319
SC Desk Feb 14, 20200157
admin Jul 13, 20200177
admin Sep 1, 20200743